Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch Luuk de Jong nwata Akụkọ Plus na-enweghị isi akụkọ eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha "Luukinho“. Anyị Luuk de Jong Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge.
Nyocha a metụtara ezinụlọ ya, akụkọ ndụ tupu ama ama, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe onye.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ikuku na imi maka ebumnuche. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Luuk de Jong nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ banyere ukmụaka Luuk de Jong - Ndụ Mbido:
A mụrụ Luuk nne ya, Loekie Ratering (onye egwuregwu volleyball ọkachamara) yana nna ya, George De Jong (bụkwa onye egwuregwu volleyball ọkachamara).
Luuk de Jong mụrụ na 27th ụbọchị nke August 1990 na Aigle, Switzerland. Aigle bụ obodo akụkọ ihe mere eme na Switzerland ebe ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na -arụkọ ọrụ ọnụ na ndị na -arụ ọrụ obibi.
Ka o sina dị, obodo ahụ nwere akụrụngwa zuru oke nke na -akwado ụtọ egwuregwu nke ndị bi na ya bụ ndị ama ama n'etiti ha bụ ndị di na nwunye Luuk mụrụ.
Yaya Toure nwa akụkọ akụkọ gbasara eziokwu
N'ịbụ onye na-eto eto na obodo Alpine nke Aigle, Luuk nwere mkpakọrịta ịhụnanya nke nwanne ya nwoke nke okenye Siem (ha abụọ na nne ha nọ n'okpuru).
Ụmụnne nwoke nwere ike ihie ụzọ maka ejima họọrọ ịkụ bọọlụ karịa nhọrọ nne na nna ha ịhọrọ egwuregwu egwuregwu, volleyball.
Ọ bụ naanị oge tupu ụmụnne amalite njem ha ka ha bụrụ ndị ọkachamara mgbe ezinụlọ kwagara Holland.
Luuk de Jong Nwatakiri Akuko - Ulo oru:
Luuk dị naanị afọ 4 mgbe ezinụlọ ya rutere Holland. Mgbe ọ bịarutere, e debara aha ya na nwanne ya nwoke n'otu ụlọ ọgbakọ dị na DZC '68 ebe ha nọrọ ọtụtụ ọnwa tupu ha amalite ọrụ ntorobịa ha De Graafschap na 2001.
Luuk de Jong Biography - Ụzọ ama ama:
Ọ bụ na De Graafschap na Luuk nọrọ afọ 8 na ụlọ akwụkwọ ntorobịa klọb tupu ha akwalite ya na ndị otu mbụ ebe ọ mere ọkachamara mbụ ya n'oge egwuregwu De Graafschap's Eredivisie megide Nac Brenda na 2008.
Egwuregwu ndị sochirinụ oge izizi Luuk mere ka ọ bụrụ mmalite nke ọrụ ọrụ ya na klọb site na ị nweta ihe mgbaru ọsọ abụọ na 14 anya ka ọ ghara ịkọ ọtụtụ enyemaka ya.
Luuk de Jong Biography - Bilie na Akụkọ Ama:
Ihe ngosi dị egwu nke Luuk wepụtara n'oge mmalite ya mere ka ọ kwaga FC Twente na 2009. Mgbe ọ nọ na FC Twente, ọrụ Luuks agaghị ebe ọ bụla kama ọ gbagoro dịka o meriri ugboro abụọ iji nyere ndị otu ya aka merie iko iko megide Capelle.
Ọ dị mma ma nọgide na-enwe ụdị egwuregwu ya dị ka Europa, Eredivisie na ndị na-eme egwuregwu, na-emegide ìgwè dị iche iche dịka Benfica, Ajax, Utrecht, FC Groningen na Schalke 04 ka ha na-amịpụta laurel maka ụlọ ọrụ ya.
N'ikpeazụ, site na njedebe nke spell na FC Twente, Luuk nwere ngụkọta ihe mgbaru ọsọ 39 na 79 anya.
Luuk de Jong Mmekọrịta Ndụ:
Luuk abiara na ndi enyi nwanyi abuo n'afo ya.
Nke mbụ bụ mmekọrịta ya na enyi nwanyị a ma ama amara aha ya bụ Maxime Dassen. The duo malitere ịlụ nwoke n'oge Luuk nọ na Bundesliga Club, Borrusia Mönchengladbach.
Otú ọ dị, ọ bụ nanị ọnwa 18 ka mmekọrịta ha dịruru tupu ha emebie ihe kpatara ya.
N'ịga n'ihu, Luuk malitere ịlụ enyi nwanyị ya ugbu a, Lizanne Van Zutven. Ọ bụ ezie na ịhụnanyabirds zutere dị ka ndị enyi na 2015, ọ bụ nanị ọnwa mgbe e mesịrị (na April 2016) ha jikọtara na ọkwa ịhụnanya.
Ngwa ngwa na-aga n'ihu, Luuk ka na-enwe obi ụtọ na Lizanne na-arụ ọrụ dịka onye na-agwọ ọrịa. A na-ele anya na ha ga-eme ka mmekọrịta ha na ọkwa ọzọ.
Luuk de Jong Ndụ Ezinụlọ:
A mụrụ Luuk n'ezinụlọ 4 na-ahụ egwuregwu. Anyị na-ewetara gị nkọwa zuru oke banyere ndị òtù ezinụlọ ya.
Banyere Luuk de Jong Nna:
A mụrụ nna Luuk bụ George de Jong na 1953. Nna nwere mpako nke ụmụ nwoke abụọ bụbu onye Dutch volleyball nke na-egwuri egwu maka Lycurgus tupu ọ gaa Switzerland na 1982.
Banyere Luuk de Jong mama:
Nne Luuk, Loekie Ratering bụkwa onye egwuregwu volleyball ọkachamara nke na -enwetabeghị ihe ngosi 90 maka ndị otu mba volleyball Dutch.
Ọ bụ simenti na -ejikọ ezinụlọ ọnụ site n'ịbụ nne na -akwado ụmụ ya nwoke na ezigbo nwunye di ya.
Banyere Luuk de Jong Nwanna:
Nwanne nwoke Luuk, Siem bụ otu afọ na ọnwa asaa karịa Luuk. Siem bụ onye e debanyere aha otu ndị ntorobịa ahụ (De Graafschap) dịka Luuk, mere ọkachamara ya na Ajax na 2005 ma nwee ike weere ya dị ka onye ịgba ọsọ na-aga nke ọma.
Ụmụnne ndị na-egwu maka klọb dị iche iche anaghị enwe ohere ijikọta mgbe ọ bụla ha na-ezukọ dịka ndị iro na mpaghara egwu. N'ụzọ na-adọrọ mmasị, Luuks na-ejikọta ahịa ya na nọmba 9 na-ede nhazi mgbe Siem na-akpọ nọmba 10.
Luuk de Jong Ndụ Nke Onwe:
Luuk bụ onye ọkpụkpọ siri ike nke ga-akwụsị ihe ọ bụla iji weghachite ebube ya furu efu. Nke a pụtara ìhè na nnabata ya dị egwu na PSV Eindhoven nke dị ugbu a, mgbe ọ dekọsịrị ọpụpụ dara ogbenye na Borussia Monchengladbach yana akpọrọ "flop" na Newcastle.
N'ebe kachasị mma nke ndụ, Luuk na-ewepụta oge iji mee ka ntụrụndụ dị jụụ site na ndị enyi ya. Ọ na-achọ ịhụ nlegharị anya ma mara mara nleta anụ ahụ mgbe ọ bụla ọ na-eche na ọ dị mkpa ịnọ naanị ya na okike.
Banyere mmekọrịta ya na mpụga, Luuk amabeghị na ọ na -etinye aka na asịrị na esemokwu.
Ọ na -eburu onye ọ bụla wee mee ngosipụta dị ka onye isi PSV Eindhoven. N'ebe bọl, Luuk nwere mmasị na American Football ma na -akwado NFL Super Bowl.
Luuk de Jong Untold Biography Eziokwu - Onye Na-egwu Egwuregwu Vidiyo:
Mgbe Luuk na ndị enyi ya na ndị enyi ya anaghị eme njem, ọ na-eme ihe omume na-akpali akpali dị ka igwu egwuregwu vidio. Luuk nwere mmasị na egwuregwu vidio ma nwee mkpokọta ngwaike egwuregwu gụnyere ihe zuru ezu nke igbe PS4.
Mba Netherlands nke na-egwu egwu kemgbe ọ bụ nnukwu Mario (egwuregwu ọ ka na-egwu) ka e nyere Joystick ọlaedo site na PlayStation.
Ihe dị mma ịsị, igwu egwuregwu vidiyo na-enyere aka ịgbakwunye njikọ aka na nnukwu ihe ụkwụ nke Luuk mepụtara dịka onye na-egwu bọl.
Eziokwu Luuk de Jong - Ejiji na Nkwalite:
Ọ bụ ezie na Luuk ka na-emeghe usoro ejiji, ọ dịghị mgbe ọ kwụsịrị igosi ekele ya maka ụlọ a na-eji ejiji ejiji.
Na ọkwa ụlọ ọrụ, Luuk hụrụ ma kwalite ngwaahịa Addidas mgbe ụlọ ọrụ ahụ na-akwụ ya ụgwọ maka onyinye ya.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ Luuk de Jong Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na -agba mbọ maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.